Q.M oo Shuruud ku xidhay wareejinta Maamulka Hawada Soomaaliya
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in maamulka Hawada Soomaaliya lagu wareejin doono marka ay heshiis rasmi ah wada gaadhaan Somaliland.
Sidaas waxa sheegay Ergayga Qaramada u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating oo warfidiyeenada kula hadlay Magaalada Hargeysa, isagoo ka soo baxay kulan uu la yeeshay Madaxweynaha Somaliland oo qasriga Madaxtooyada ku qaabiley.
Micheal Keating ayaa sheegay in inkastoo ay labada dhinacba xusul-duub ugu jiraan arrinta hawada, haddana muhiimaddu ay tahay inaan heshiis dhamaystiran la’aantii wareejinta Maamulka Hawadu ahayn suurto-gal.
Halkan ka Daawo Micheal Keatin oo ka jawaabay su’aal laga waydiiyey Maamulka Hawada:
Dawladda Soomaaliya, ayaa dabayaaqadii bishii December ku dhawaaqday inay si rasmi ah ula wareegtay Maamulka Hawada Soomaaliya oo ay Somaliland ku jirto, taasoo dawladda Somaliland-na sheegtay inaanay aqbali doonin.
Previous: Golaha Guurtida Somaliland oo kulan deg deg ah ka yeeshay Dagaalka Puntland
Next: Lix qodob oo ka soo baxay Shirka Golaha Wasiirrada Somaliland
Somaliland: Guddoomiye Degmo oo dagaal kula jira Geedka Garan-waaga
Suldaan Cumar oo baaq nabadeed u diray Beellaha Sanaag
Madaxda Hanti-dhowrka guud oo iska difaacay eeddeymo loo jeediyey
Guddoomiyaha Guurtida oo Tallooyin u jeediyey Salaadiinta
Cirro oo falaadh siyaasaddeed ku ganay Madaxweyne Muuse